अनलाइन मानसिक पठन | अब एक प्रत्यक्ष मानसिक संग च्याट गर्नुहोस्। PsychicBonus.com शीर्ष अनलाइन मनोविज्ञान, टैरो र ज्योतिष पाठकहरु संग माया र खुशी को लागी तपाइँको बाटो खोज्नुहोस्। एक मुक्त मानसिक च्याट सत्र शुरू गर्नुहोस्। यहाँ मानसिक पठन तपाइँ सबैभन्दा व्यावहारिक तरीका मा जवाफ दिनेछन्।
अनलाइन मानसिक रीडिंग
मैले मानसिक रीडिंग कम्पनीहरूको अनुसन्धान र मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराईएको सबैभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक फेला पार्न मद्दत गर्दछु। मैले के गर्ने विचारहरूको लागि मैले समीक्षाहरू प्रदान गरेको छु इन्टरनेटमा शीर्ष 10 मानसिक पढाइ कम्पनीहरू। म केवल त्यस्ता कम्पनीहरुहरूमा समीक्षा प्रकाशित गर्नेछु जुन मैले आफैं प्रयोग गरेको छु र मैले खोज्दै उच्च स्तरहरू भेट्न पाएको छु। यसले ईमानदार चीजहरू राख्छ। म तपाईंलाई मेरो विस्तृत अनुसन्धानको फायदा लिन निम्तो दिन्छु, र विश्वास छ कि तपाईले कम्पनीलाई भेट्टाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाइँका आवश्यकताहरु सबै भन्दा राम्रोसँग फिट हुन्छ। आनन्द लिनुहोस्!
ओरेनम संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक अपेक्षाकृत नयाँ मानसिक नेटवर्क हो, तर तिनीहरू पोल्याण्डमा उनीहरूको स्थापना भएको धेरै वर्षदेखि व्यवसायमा छन्। तिनीहरू अब हंगेरी बाहिर आधारित छन्। उनीहरूसँग केहि अद्वितीय सुविधाहरू छन् जुन अन्य मानसिक नेटवर्कले प्रस्ताव गर्दैन। तिनीहरू च्याट रीडिंग, ईमेल रीडिंग र वेब क्याम रीडिंग प्रस्ताव गर्दछ। वेबक्याम रीडिंग यूट्यूब भिडियो हेर्नु जस्तै हो, र तपाईंलाई मानसिकको साथ कुराकानी गर्न तपाईंको आफ्नै वेबक्याम वा माइक्रोफोनको आवश्यकता पर्दैन। सबै संचार वेबक्याम भिडियोमा संलग्न च्याट बक्समा टाइप गरिएको छ। तपाईंको मनोवैज्ञानिक स्क्रीनमा प्रत्यक्ष जवाफ दिनुहुन्छ। यदि तपाईंसँग वेबक्याम र माइक्रोफोन छ भने तपाईं सीईक साइकिकसँग पनि त्यसरी नै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
Oranum वेब साइट समीक्षा >>
AskNow मनोिक स्रोतको लागी एकदम नजिकको दोस्रो थियो। Asknow व्यापार मा 1995 पछि भएको छ, र व्यापार मा सबै सम्मानित मानसिक नेटवर्क मध्ये एक हो। AskNow पढ्ने अनलाइन प्रस्ताव गर्न पहिलो मानसिक नेटवर्कको थियो, र देशको केहि राम्रो मनोवैज्ञानिक पाठकहरु लाई रोजगार गर्दछ। तिनीहरू फोन र च्याट दुबै प्रस्तावहरू प्रदान गर्छन्, र तिनीहरूसँग मनोवैज्ञानिक छन् जुन स्पेनिस भाषामा पढ्न सक्छन्। यो केहि अन्य कुनै मानसिक नेटवर्क अफर छैन। तिनीहरूको मूल्यहरू समग्र रूपमा उचित थियो, र उनीहरूको वेबसाइट प्रयोग गर्न सजिलो थियो।
सोध्नुहोस् वेब साइट समीक्षा >>
लाइफ रिडर अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र बेलायतमा एक प्रख्यात मानसिक सेवा हो। भर्खर तिनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका मा मनोवैज्ञानिक पठनहरू प्रस्ताव गर्न शुरू गरेका छन्! उनीहरूको मनोविज्ञानको चयन राम्रो छ र तिनीहरूको गुणस्तर बराबर देखिन्छ। मनोविज्ञानको सबैभन्दा ठूलो चयन हुनुको साटो तिनीहरू साइकिक पाठकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् जुन सही ईमान्दार पठनहरू प्रदान गर्दछ जसले हामीलाई बताउँदछ कि उनीहरू द्रुत बोकल बनाउनको सट्टा तपाईंको व्यवसाय कमाउन धेरै मेहनत गरिरहेका छन्। यसको कारणले तिनीहरूले 2008 मा शुरू गरे पछि धेरै वफादार ग्राहक आधार विकसित गरेका छन्। उनीहरूको परिचयात्मक मूल्य केवल $ 0.19 / मिनेट हामीले समीक्षा गरेको कुनै पनि साइकिक नेटवर्कले मेल खाँदैन, र यो एक आश्चर्यजनक सम्झौता हो। यद्यपि तिनीहरूको वेबसाइट प्रयोग गर्न एकदम सजिलो थियो र ग्राहकहरूका लागि राम्रो FAQ प्रदान गर्ने हामी निराश थियौं तर उनीहरूसँग पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी वा ग्राहक सेवा फोन नम्बर छैन यदि तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने कल गर्न सक्नुहुन्छ।
LifeReader वेब साइट समीक्षा >>
मानसिक स्रोत हाम्रो शीर्ष मनोिक नेटवर्कको मूल्याङ्कन गरिएको थियो किनभने उनीहरूको भयंकर मनोवैज्ञानिक, असाधारण ग्राहक सेवा, र विभिन्न उपहारका साथ मनोवैज्ञानिकहरूको व्यापक चयन। मानसिक स्रोत 1989 मा, इन्टरनेट भन्दा पहिले5वर्षमा स्थापित गरिएको थियो। हजारौं ग्राहकहरू मनोिक स्रोत रोजगारीमा मनोवैज्ञानिक छनौट गर्छन्। तिनीहरू आफैलाई ग्राहक सन्तुष्टि र किफायती मूल्यहरूमा गर्व गर्छन्।
साइकोसोर्स वेब साइट समीक्षा >>
कीन पहिलो मानसिक नेटवर्क अनलाइन मध्ये एक थियो, र अब सम्म सबैभन्दा ठूलो मानसिक नेटवर्क हो। तिनीहरूसँग सब भन्दा धेरै उपलब्ध मनोविज्ञान छ। किनभने तिनीहरूसँग सल्लाहकारहरूको लागि वास्तवमै कुनै स्क्रीनिंग प्रक्रिया छैन तिनीहरू मनोविज्ञानको सब भन्दा ठूलो मात्रालाई आकर्षित गर्दछन्। गहन मनोवैज्ञानिकहरूले टेलिफोन साइकिक पठनहरू वा च्याट रीडिंगहरू गर्न सक्दछन्, तपाईले छनौट गर्नुभएको सल्लाहकारले यसलाई प्रस्ताव गर्दछ। हामीले वास्तवमै केनले प्रयोग गरेको कल ब्याक फिचरलाई मनपरायो। यदि तपाई मनोवैज्ञानिकसँग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ भने उपलब्ध छैन केन डॉट कॉमले स्वचालित रूपमा तपाईलाई फिर्ता बोलाउँदछ जुन ती उपलब्ध हुन्छन्। मनोविज्ञानको ठूलो चयन, र उन्नत टेक्नोलोजीले साँच्चिकै Keen.com लाई महान बनाउँछ, तर मनोविज्ञानको लागि कुनै पनि प्रकारको स्क्रीनिंग वा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको अभावले हामीलाई थोरै चिन्तित तुल्याउँछ।
उत्सुक वेब साइट समीक्षा >>
हलिवुड मनोवैज्ञानिक एक ब्रान्ड नयाँ सञ्जाल हो जुन भर्खरै खोलिएको छ। तिनीहरूको उद्देश्य तिनीहरूको सञ्जालमा देशमा सबैभन्दा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक छ। मलाई भन्न चाहन्छु कि उनि लक्ष्य पूरा गर्दै छन्, तर उनीहरूको नेटवर्कमा हरेक मानसिक छैन। मनोवैज्ञानिकहरूको छनौट सानो छ, तर तिनीहरू सबै राम्रो छन्। तिनीहरू फोन र च्याट दुबै प्रस्तावहरू प्रदान गर्छन्, र तिनीहरूको दरहरू त्यहाँ काम गर्ने प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई विचार गर्न उचित थियो।
हलिउडप साइकस समीक्षा >>
मानसिक पहुँच एक सानो मानसिक नेटवर्क हो, तर तिनीहरू कुनै पनि सुविधाहरू छोड्दैनन्। साइकिक एक्सेस एक मात्र मानसिक नेटवर्क हो जुन हामीले पूर्वावलोकन गर्‍यौं जुन वेब क्याम रीडिंगको प्रस्ताव गर्‍यो, जुन कम्तीमा भन्नु अद्वितीय छ। नेटवर्क डगसी नामको एक प्रख्यात साइकको स्वामित्वमा छ। डगसीले व्यक्तिगत रूपमा सबै मनोवैज्ञानिक स्क्रीन्स गर्दछ कि उनीहरूसँग काम गर्न अनुमति दिनुभन्दा पहिले। मनोवैज्ञानिक स्रोतको छेउमा तिनीहरूसँग त्यहाँ उत्तम स्क्रीनिंग प्रक्रिया छ।
साइकियक्सेस वेब साइट समीक्षा >>
कासम्बा कुराकानीमा आधारित उत्तम पढीमा उत्कृष्ट भएर आफूलाई अलग राख्छ। हालसालै, साइक्सिकले सेलेक्टिक्सले टेलिफोन रीडिंगहरू प्रस्ताव गर्न शुरू गरिसकेका छन्, यद्यपि नेटवर्कमा सबै साइक्सिक्सले फोन पढ्ने प्रस्ताव गर्दैन। कसम्बा कुराकानीमा आधारित पठनमा विशेषज्ञता राखेर आफूलाई अलग पार्छ, र तिनीहरू यसमा उत्कृष्ट छन्। कसम्बा पहिले प्रत्यक्ष व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कसम्बा 1995 मा स्थापित भयो जहाँ व्यक्ति कानून, वित्त, र मनोविज्ञान सहित धेरै बिभिन्न विषयहरूमा विज्ञहरूको सल्लाह लिनको लागि स्थानका रूपमा थिए। हालसालै प्रत्यक्ष व्यक्तिले कसम्बा ब्रान्डलाई काटिदियो अब एक आधिकारिक साइकिक नेटवर्क हो! हामीले च्याटमा आधारित पढ्ने चीजहरू राम्रो पाउँदछौं किनकि तिनीहरूले तपाईंको सबै च्याटहरूको लग राख्दछन्, ताकि तपाईं जहिले पनि पछाडि जान सक्नुहुन्छ र उनीहरूले भनेका कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले चाहानु भएको कुनै पनि समयमा गर्नुभयो।
कसम्बा वेब साइट समीक्षा >>
कसरी भन्नु हुन्छ तपाईको मनोवैज्ञानिक ईमानदार वा नकली हो
धेरै व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ वा जीवनका कठिन समयको दौडान सल्लाहको लागि मानसिकतालाई फर्काउँछ। उत्तम मनोविज्ञानबाट उत्कृष्ट मार्गदर्शन खोज्न सकिन्छ, तर यसलाई निर्धारण गर्न गाह्रो हुन सक्छ कि एक पाठक वैध वा नकली हो कि छैन। तपाईं जस्तै एक स्थिति मा गर्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो चीज आफैलाई शिक्षित छ ताकि यो एक कलाकारको चेतावनी संकेतहरू सजिलो छ।
तपाईंको मनोवैज्ञानिक अस्पष्ट प्रश्नहरू सोध्दै
यो सम्झना महत्वपूर्ण छ कि एक सम्मानित मानसिक आफ्नो जानकारी एक वास्तविक स्रोत बाट प्राप्त गर्दैछ, त्यसैले जानकारी केही विशिष्ट हुन जाँदैछ। एक नकली पाठकले यसलाई बिग्रेको छ, र तिनीहरूले तपाईंलाई वास्तविक सूचनाको नेतृत्व गर्न प्रयास गर्न अस्पष्ट प्रश्नहरू सोध्नेछन्।
उदाहरणका लागि, बेइमानी मानसिक हुन सक्छ केहि कुरा भन्न सक्छ, "आर नामको मानिस को हो?" सम्भावनाहरू छन्, अधिकांश मानिसहरू आफ्नो परिवारमा पुरुषको पत्रमार्फत नामको नाममा आर.एन.
एक वैध मानसिक भन्नाले यसो भन्छ, "म यहाँ रबर्टको नाममा एक जना मानिस हुँ जुन हृदयघातबाट निस्केको थियो।" जानकारी वास्तविक र विशिष्ट हुनेछ र अधिकांश समय, तपाईं त्यो जानकारी धेरै चाँडै चिन्नुहुनेछ। उदाहरणहरू:
नक्कली मनोवैज्ञानिक "कसलाई जवान मरेको थियो, वा दुःखलाग्दो तरिकामा पुरुष थियो?"
वास्तविक मनोवैज्ञानिक: "मेरो जवान पुरुष छ जसले कार दुर्घटनामा पारियो।"
नक्कली मनोवैज्ञानिक "त्यहाँ तपाईंको जीवनमा प्रेम रुचि छ जुन तपाईं जस्तो महसुस गर्नुहुन्न कि तपाईले 100% प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ?"
वास्तविक मनोवैज्ञानिक: "तपाईंले लामो समयको लागि गर्नुभएको व्यक्ति तपाईंको चाहानुहुन्छ जसरी तपाईं चाहानुहुन्छ वा योग्य हुनुहुन्छ। यो व्यक्तिलाई के के होल्डिंग को प्रतिबद्धता को डर छ र तपाईंलाई पर्याप्त हुन्छ जब तपाईं निर्णय गर्न आवश्यक छ। "
तपाईंको भावनात्मक प्रतिक्रिया
त्यहाँ व्यक्तिहरू वास्तवमा एक सन्देश वा निर्देशनको लागि आशा गर्दै हुन्छन्। उनीहरूले आशा गर्न सक्दछन् कि तिनीहरू बेपत्ता मानसिक पाठकहरूका लागि सजिलो लक्ष्य बन्न सक्छन् जुन प्रमाणपत्रको दावी गर्छन्। तथापि, जब तपाईं सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकसँग बोल्नु हुन्छ, उनी प्रायः सूचनाहरू प्रकट गर्नेछन् जसले आफ्ना ग्राहकहरूको तत्काल र बलियो भावुक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछ। यही कारणले गर्दा जानकारी घर हिउँदछन् र व्यक्तिलाई सहज रूपमा जानकारीको लागि जानकारी थाहा छ।
यो हरेक एक पटक तपाईं एक मानसिक कुरा बोल्दैन, तर यो पढ्नबाट प्राप्त जानकारी आउँदा आफ्नो भावनाहरु र अन्तर्वार्तामा भरोसा गर्न सिक्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं स्वचालित रूपमा जानकारीबाट विच्छेदन महसुस गर्नुहुन्छ भने, जस्तै यो केवल तपाईंसँग सम्बन्धित छैन, त्यसपछि तपाईं नजिकको ध्यान तिर्न र अन्य चेतावनी चिन्हहरू हेर्न चाहन सक्नुहुन्छ।
कर्स वा हिज्जे
यदि एक पाठकले तपाईंलाई बताउँछ कि तपाईं मा राखिएको श्राप हो, वा नकारात्मक ऊर्जा तोक्नुको लागि एउटा हिज्जे आवश्यक छ, तिनीहरू सम्भवतः नकली छन्। यी धोखाधडीहरूले आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई डेटिङ गरेर उनीहरूलाई बताउनेछन् कि एक अभिशाप हृदयघातको कारण र हालैका कुनै अन्य समस्याहरू हुन्। त्यसपछि तिनीहरू केही पुरातन अनुष्ठान प्रदर्शन गरेर श्राप हटाउन प्रस्ताव गर्नेछन्, र तिनीहरूले त्यसो गर्न शुल्क चार्ज गर्छन्।
यो एक मानसिक घोटाला को एक श्राप रद्द गर्न को लागी ग्राहकहरु लाई डराउन को लागी प्रयास को एक निश्चित संकेत हो। दुःखको कुरा, धेरै मानिसहरू यसको लागि गिरिन्छन् किनभने एक श्रापले जीवनको समस्यालाई व्याख्या गर्न व्याख्या गर्ने एउटा राम्रो तरिका देखिन्छ र तिनीहरू विश्वास गर्छन् भन्ने विश्वास गर्दैनन्। दुर्भाग्यवश, एक श्राप हटाउन केहि सौ डलर तिर्न सजिलो छैन। "मानसिक" लाई कहिल्यै विश्वास नगर्ने जसले तपाईंलाई यो बताउँछ।
अर्को महान कुराले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ कि एक मानसिक सम्मान हो कि छैन अनलाइन मनोवैज्ञानिक कुराकानी समीक्षा र प्रशंसापत्रका लागि अनलाइन जाँच गर्दैछ। विगतका ग्राहकहरु जसले एक विशेष मनोचिकित्साको साथ सकारात्मक वा नकारात्मक अनुभव गरेका छन् यसको बारेमा कुरा गर्न सम्भव छ। समीक्षाहरू र प्रशंसापत्रहरू पढ्न सक्छन् तपाइँले निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ कि मानसिक अन्य ग्राहकहरूको लागि उपयोगी थियो र के उनीहरूले विश्वास वैध वा होइन भन्ने कुरा बुझ्दछन् कि।
यो एक महान गेज हुन सक्छ जब यो मानसिक छ कि छैन वा सोच्न आउँछ। यहां सम्म कि शीर्ष मनोवैज्ञानिकहरु लाई पनि ग्रहणकारी या सहकारी ग्राहकहरु संग काम नहीं गरिन सक्छ, यसैले महान पाठकहरुको लागि यहां र त्यहाँ एक नकारात्मक समीक्षा गर्न सम्भव छ, तर ती धेरै खराब समीक्षाहरु संग नजिक को लागी देखना चाहिए।
यी चेतावनी चिन्हहरू स्पेस गर्न सिक्दा, तपाईं आफैले अनलाइन अनलाइन मानसिक घोटालामा आफ्नो कडा अर्जित पैसा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। बाहिरिंदा कुनै पनि सन्देश र डोऱ्याइ संगै जान्न चाहने वास्तविक, सचेत मनोवैज्ञानिक अस्तित्वमा आश्वासन दिई उनीहरूले ब्रह्ड, अर्को पक्ष वा अतिरिक्त स्रोतबाट तपाईंको लागि प्राप्त गर्न सक्छन्।
अर्को चरण के हो?
यदि तपाइँ वैध मानसिक पढाइ खोज्दै हुनुहुन्छ भने, केवल माथि उल्लेख गरिएका कम्पनीहरू जस्तै हामीले सूचीबद्ध तीन मानसिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्यौं (Asknow, मानसिक स्रोत, Kasamba र अन्य।)। यी तीनवटा कम्पनीहरू छनौट गर्ने छनौट गर्ने एक विशाल चयन छ, र प्रत्येक पाठक एक सख्त परीक्षण र स्क्रीडिङ प्रक्रिया को माध्यम ले यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि उनि वास्तव मा वास्तविक हो र वास्तविक क्षमता हो।
साइकिक कूपन साइटहरू:
नि: शुल्क पढ्ने कुपन
सपना व्याख्या कूपन
ट्यारो र कार्ड कूपन
मनोवैज्ञानिक पठन कुपनहरू
ट्यारो कार्ड कुपनहरू
टैरो साइकिक कुपनहरू
मनोवैज्ञानिक स्रोत कूपन
क्यालिफोर्निया साइकिक कूपनहरू
मानसिक मुठभेड कुपन
अमेरिका साइकिक कूपनहरू